News - Ka-hortagga rakibidda sariirta isbitaalka koronto
Sariirta isbitaalka Eletric
Sariirta daryeelka guriga
Sariirta jarista foosha
Qalabka sariirta ee cisbitaalka
Tarooli diiwaanka bukaanka
Tarooli ABS utility
Saxanka xoqida ee ahama
Waxyaabaha kale ee gargaarka degdegga ah
WARAR / BLOG
Ka-taxaddar rakibaadda sariirta isbitaalka koronto
1. Kahor intaadan isticmaalin sariirta caafimaadka korontada ku shaqeysa, marka hore hubi in xarigga korontadu si adag u xiran yahay iyo in kale. Haddii fiilada kontoroolka ay tahay mid la isku halleyn karo.
2. Xarigga iyo fiilada korantada ee kiciyaha toosan ee koontaroolaha waa inaan la dhigin inta udhaxeysa xariirka wiishka iyo looxyada sariirta sare iyo hoose si looga ilaaliyo fiilooyinka in la jaro oo ay sababaan shilalka qalabka shaqsiyeed.
3. Ka dib markii diyaaradda dambe la kiciyo, bukaanku wuxuu dul jiifaa guddiga oo looma oggola inuu riixo.
4. Dadku sariirta kuma istaagi karaan oo wey boodayaan. Markuu gadaal kor u kaco, dadka gadaal gadaal ka fariista oo sariirta dhinaceeda ku istaagaan looma ogola inay riixaan.
5. Ka dib markii taayirka guud uu istaago, looma oggola inuu riixo ama dhaqaaqo, wuu dhaqaaqi karaa oo keliya marka la sii daayo bareegga.
6. Lama oggola in lagu riixo si siman si looga fogaado waxyeelo soo gaadha dariiqa wiishka.
7. Dusha sare ee wadada aan sinnayn looma hirgalin karo si looga hortago waxyeelo soo gaadha giraangiraha guud ee sariirta caafimaadka korantada ku shaqaysa
8. Markaad isticmaaleysid kontoroolka, badhamada kujira galka koontaroolka kaliya mid baa lagu cadaadin karaa si loo dhameystiro ficilka. Lama oggola in la riixo wax ka badan laba badhan isla mar ahaantaana si loogu hawlgeliyo sariirta caafimaad ee hawlkarnimada badan leh, si looga hortago cilladaha oo khatar loo galiyo badbaadada bukaannada.
9. Markay u baahan tahay in la dhaqaajiyo sariirta caafimaad ee korontada ku shaqeysa oo fara badan, waa in fiilada korontada laga furaa, xariijinta korontada waa in la dhaawacaa inta aan la riixin.
10. Markay u baahan tahay in la dhaqaajiyo sariirta caafimaadka badan ee korontada ku shaqeysa, dariiqa kor loo qaadayo waa in kor loo qaadaa si looga hortago bukaanku inuu ku dhaco oo uu ku dhaawacmo inta uu socdo. Marka sariirta korontada dhaqaajineyso, labo qof waa inay wada shaqeeyaan isla waqti isku mid ah si looga fogaado in lumiyo xakamaynta jihada inta lagu jiro howsha hirgelinta, taasoo dhaawac u geysaneysa qeybaha dhismaha isla markaana qatar gelinaysa caafimaadka bukaanka.
Waqtiga boostada: Jan-26-2021
Zhangjiagang Annecy Makiinado Co., Ltd.
Marka loo eego baahiyahaaga, kuu habeyn, oo ku sii alaabooyin aad u qiimo badan.
Gawaarida Gawaarida Caafimaadka, Tarooli Medical Iyadoo khaanado, Tarooli Kalkaalinta wireless, Isbitaalka gawaarida, Trolley Medical, Tarooli Laptop,